Astaamaha maskaxda: Neuroplasticity | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Asaasiga Maskaxda Neuroplasticity
Ereyga neuroplasticity wuxuu jebiyaa sida neuro ee "neuron", unugyada dareemayaasha ee maskaxda iyo nidaamka dareenka. caaga waxaa loogu talagalay "isbeddel, macquul ah, wax laga beddeli karo." Neuroplasticity-ka waxaa loola jeedaa awoodda maskaxda ee isbeddelka jawaabta khibradda. Maskaxdu waxay tan ku samaysaa iyada oo xoojinaysa isku xidhka ka dhexeeya unugyada neerfaha qaarkood halka ay daciifinayso isku xidhka dadka kale. Tani waa sida maskaxdu u keydiso xusuusta, wax u barato, wax u barato una waafajiso jawiga is beddelaya. Laba mabda 'ayaa xukuma balaastigga maskaxda:
First, 'unugyada neerfaha ee wada shidaa silig wadajir ah' waxay ka dhigan tahay in laba dhacdo ay si xoog leh isugu xirmi karaan haddii ay isku waqti dhacaan. Tusaale ahaan, socod baradka taabanaya kuleylka kulul markii ugu horreysay wuxuu dhaqaajinayaa labada unug ee neerfaha ee ka baaraandegaya muuqaalka dusha sare iyo unugyada dareemayaasha ee dareema xanuunka gubashada. Labadan dhacdo ee aan horay isku xirnayn waxay si joogto ah ugu wada xiriiraan maskaxda iyadoo loo marayo laamaha unugyada neerfaha. Daawashada sawirrada kicinta galmada markii ugu horreysay waxay keeneysaa xusuus go'an maskaxda ilmaha waxayna bilaabeysaa inay qaabeyso qaabkiisa kacsiga galmada.
Marka labaad, 'isticmaal ama lumin' ugu habboon inta lagu jiro daaqadaha qaarkood ee horumarka. Waa sababta ay aad ugu fududdahay inaad barato xirfado gaar ah ama dabeecado da 'gaar ah. Ma aragno jimicsiga Olombikada oo ka bilaabanaya da'da 12 ama fannaaniinta riwaayadaha oo ka bilaabanaya da'da 25. Qaan-gaarnimadu waa waqtiga barashada galmada. Unugyada neerfaha ee kaqeyb galaya internetka isla markaana gujinaya goobta ilaa goobta dabka si wadajir ah ula socda kuwa xiisaha galmada iyo raaxada leh. Nidaamkiisa limbic wuxuu shaqadiisa qabanayaa: taabashada kariyaha = xanuunka; meelaha lulataaye lulataaye = raaxo. Joojinta waxqabadka waxay caawineysaa daciifinta ururada.
Maskaxdeenu waxay qayb ka tahay nidaamka neerfayaasha ee la dheereeyey. Waxay ka kooban tahay habka dhexe ee neerfaha (CNS) iyo nidaamka neerfaha durugsan (PNS). CNS waxay ka kooban tahay maskaxda iyo lafdhabarta. Asal ahaan waa xarunta kantaroolka ee kaheleysa dhamaan macluumaadka dareenka jirka oo dhan kadib markay go aansan karto si ay udhaqaajiso jawaabaha ku habboon - habka, ka noqoshada ama 'sida aad tahay'. Marka la eego jawaabaha gaarka ah waxay ku dirtaa calaamado iyada oo loo marayo PNS. Sidaa darteed sawir erotic ah, ur, taabasho, dhadhamin ama erey wadaag ah ayaa dab qabadsiin doona dariiqyada kacsiga galmada ee maskaxda ilaa xubnaha taranka iyadoo loo marayo nidaamka neerfaha qayb yar oo ilbidhiqsi ah.
Maskaxdu waxay leedahay kudhowaad 86 bilyan oo unugyada neerfaha ama neerfaha. Neerfaha ama unugyada neerfaha waxay leeyihiin unug unug oo ka kooban bu'da leh walxaha DNA. Muhiimad ahaan, waxa kale oo ku jira borotiinno beddelaya qaabka markay la qabsadaan soo gudbinta macluumaadka meelo kale.
Neurons wuxuu ka duwan yahay unugyada kale ee jirka ku jira:
1. Neurons waxay leeyihiin qaybo unugyo gaar ah oo la yiraahdo dendrites iyo fiilooyinka. Dendrites waxay keenaan calaamadaha korantada si ay jirka u helaan, faatijiyadu waxay ka helaan macluumaadka jirka.
2. Neurons waxay la xiriiraan midba midka kale iyada oo loo marayo habka korantada.
3. Neurons waxaa ku jira qaabab gaar ah (tusaale ahaan, isdhaafka) iyo kiimikooyinka (tusaale ahaan, neurotransmitters). Hoos eeg.
Neurons waa unugyada rasmiga ee nidaamka dareenka. Shaqadooda waa inay gudbiyaan farriimaha hal qayb oo ka mid ah jirka oo u gudbiyay mid kale. Waxay ka dhigan yihiin 50%% unugyada maskaxda ku jira. Qiyaasta kale ee 50% waa unugyada galaaska. Kuwani waa unugyo aan dawli ahayn oo ilaaliya miyir-qabtayaasha, waxay abuuri karaan maskaxda, waxayna bixiyaan taageero iyo difaacida nuuroonada nidaamka dhexe ee neerfaha iyo nidaamka dareenka maskaxda. Unugyada glial waxay dayactiraan sida nadiifinta unugyada dhintay iyo dayactirka kuwa kale.
Qalabka neurtonku wuxuu sameeyaa waxa aynu u malaynayno 'arrin adag'. Marka qumanka, oo noqon kara mid aad u dheer ama gaaban, waxaa lagu daboolaa walxo dufan cad (myelin), tani waxay u oggolaanaysaa in calaamaduhu ay sii socdaan si deg deg ah. Cabbiraaddan cad ama madadaalo, waa waxa badanaa loo yaqaan 'arrin cad'. Dendrites kuwaas oo hela macluumaadka ma dhicin. Maskaxda dhallinyaradu waxay isku xirtaa gobollada maskaxda iyo waddooyinka. Waxay sidoo kale kordhinaysaa isku-xirnaanta iyada oo loo marayo mala-awaal.
Calaamadaha korontada iyo kiimikada
Niyoolojiyeyaasheena waxay qabtaan farriimaha qaabka calaamadaha korantada ee loo yaqaanno dareen-celinta ama awooda waxqabadka. Si loo abuuro dareemo dareemid, nulloonkayagu waa inuu ku faraxsan yahay, sababtoo ah feker ama khibrad, si uu u soo diro mawjado hoos u dhigo dhererka unugta si uu ugu faraxsanaado ama uu joojiyo neurotransmitters at the end of the axon ah. Stimuli sida iftiinka, sawirada, codka ama cadaadiska oo dhan waxay soo jiidanayaan dareemayaasha dareenka. [/ X_text] [/ x_column] [/ x_row]
Macluumaadku wuxuu ka iman karaa hal neuron illaa mid kale oo neuron ah oo ka soo baxa sinjiga ama farqiga. Neurons dhab ahaantii ma taabtaan midba midka kale, sinji waa farqiga yar ee kala go 'neurons'. Neurons kasta waxay leedahay meel kasta oo u dhaxeysa 1,000 iyo 10,000 ama 'synapses' oo leh qanjirro kale. Xusuusin ayaa la abuuri doonaa isku dhafka neurada oo keenaya urta, indhaha, dhawaaqyada iyo wada shaqaynta.
Marka dareenka dareeraha ama ficilka waxqabadka ay la socdaan oo ay gaaraan dhamaadka axon ee xarunteeda, waxay kicisaa nidaamyo kala duwan. Saldhigga waxaa ku yaal vesicles (sacs) yar yar oo laga buuxiyo noocyo kala duwan oo neerfaha ah oo sababa noocyo kala duwan oo jawaabo ah inay dhacaan. Calaamado kala duwan ayaa dhaqaajinaya vesicles-ka ay ku jiraan neurotransmitters-yada kala duwan. Vicles-yadan waxay u dhaqaaqayaan cirifka terminalka waxayna ku sii deynayaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin shaashadda. Waxay ka dhaqaaqdaa neerfahaan guud ahaan isgoyska ama isku laabma waxayna kicisaa ama joojisaa neerfaha xiga.
Haddii uu jiro hoos u dhac midkood xaddiga neerfaha kiimikada (tusaale dopamine) ama tirada soo dhaweyaasha, farriinta way sii adkaanaysaa in la gudbiyo. Dadka qaba cudurka Parkinson waxay leeyihiin awood tilmaam dopamine. Heerarka sare ee neerfaha kiimikada ama qabtayaasha ayaa loo tarjumay farriin adag ama dariiqa xusuusta. Marka isticmaale qaawan uu ku foorarsado waxyaabo dareen ahaan kicinaya, waddooyinkaas waxay noqdaan kuwo firfircoon oo la xoojiyo. Xilliga korantada ayaa si fudud u dhaafa iyaga. Markuu qofku caado ka tago, waxay qaadataa xoogaa dadaal ah si looga fogaado wadadaas ugu yaraan iska caabin iyo qulqulka fudud.
Neuromodulation waa physiological geedi socodka kaas oo la bixiyey neuron waxay isticmaalaan hal ama dhowr kiimiko ah si ay u xakameeyaan dadyowga kala duwan ee qanjidhada. Tani waxay ka duwan tahay midka caadiga ah gudbinta synaptic, taas oo mid ka mid ah neuronka presynaptic uu si toos ah u saameynayo lamaanaha postsynaptic-ka, gudbinta macluumaadka hal-halba ah. Neuromodulators oo qarsoodi ah koox yar oo qanjidhada ah ayaa ku fidsan qaybo badan oo ka mid ah habdhiska dareenka, oo saameeya qanjirrada badan. Cudurka neuromodulators ee habka dhexe ee dareemayaasha ah waxaa ka mid ah dopamine, serotonin, acetylcholine, histamine, Iyo norepinephrine / noradrenaline.
Neuromodulation waxaa loo maleyn karaa in uu yahay neurotransmitter oo aan dib u soo celinin neur-mareenka ka hor ama metabolit. Noocyada noocan oo kale ahi waxay ku dhamaanayaan waqtiga kharashka badan dheecaanka cerebrospinal (CSF), Saameyn (ama "wax ka beddelid") waxqabadka dhowr dareemayaal kale oo ku jira maskaxda. Sababtan awgeed, qaar neurotransmitters ah ayaa sidoo kale loo tixgeliyaa inay yihiin neuromodulators, sida serotonin iyo acetylcholine. (fiiri wikipedia)
<< Horumarka Evolutionary ee Maskaxda Kiimikada kiimikada '